वर्डफ्लुबाट मानिसको मृत्युः व्यापारिक स्वार्थले पहिचान गुमनाम
काठमाडौं,२६ वैशाख । हालै वर्डफ्लुको संक्रमणबाट मृत्यु भएका एक ‘गुमनाम व्यक्ति’ को यथार्थ विवरण व्यापारिक स्वार्थका कारण सार्वजनिक नगरिएको बुझिएको छ ।
मृत्यु भएका व्यक्तिको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्दा जनमानसमा त्रास फैलिने र पोल्ट्री फार्महरु पनि बन्द हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर गोप्य राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले सरल पत्रिकालाई बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सरल पत्रिकासँग कुरा गर्दै एच.फाइभ.एन.वान. भाइरसबाट मृत्यु भएको भनिएका विरामीको बारेमा ढिलो चाँडो सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले तुरुन्त बर्डफ्लु संक्रमित बिरामीको मृत्युको खुलासा नगरिएको बताए । तत्कालै सबै विवरण खुलासा गर्दा जनमानसमा त्रासदी फैलन सक्ने भएकोले घटना गोप्य राखिएको जानकारी उनले दिएका छन् ।
श्रेष्ठ भन्छन्,“तत्कालै सबै विवरण खुलाएको भए देशका सबै पोल्ट्री फार्म बन्द हुने अवस्था आउँथ्यो ।’
काभ्रे निवासी भनिएका ती अज्ञात व्यक्तिलाई गत चैत १० गते अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । भाईरस संक्रमण भएको आशंकामा भर्ना गरिएका उनको व्यक्तिगत विवरण सोही बेला देखिनै गोप्य राख्ने निर्णय भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार विरामीको जाँचको लागि आवश्यक चिकित्सकहरु थपजाँचका लागि घटना स्थलमा पुगेका थिए । चराहरु र पोल्ट्री फार्महरुको स्थलगत अध्ययन पनि गरिएको थियो ।
इन्फ्लुएन्जाको प्रकार १ सय पचास किसिमका हुने विज्ञ बताउँछन् । ती बिरामी अस्पतालमा आउँदा नै इन्फ्लुएन्जा भएको थाहा भएको थियो । त्यसपछि तत्कालै विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोलाब्रेटिङ्ग सेन्टर अन्तर्गत जापानमा इनफुल्यान्जाको प्रकृति जाँच्न पठाएको बताईन्छ ।
जापानबाट स्वास्थ्य रिपोर्ट आउनु दुईदिन अगावै वैशाख १५ गते विरामीको मृत्यु भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् वैशाख १७ गते जापानबाट रिपोर्ट आएकोे र विरामीमा बर्डफ्लुको संक्रमण भएको पत्ता लागेको थियो ।
'कुखुराको मासु खाए हुन्छ'
अहिले नेपालमा बर्डफ्ल्युको संक्रमण नरहेको श्रेष्ठले बताए । उनले कुखुरा तथा पशुपंक्षिको मासु निर्धक्क राम्रोसँग पकाएर खाने सुझाव दिए ।
रोगको संक्रमण मौसम अनुसार नहुने र जुनसुकै समयमा मानिस रोगप्रति सचेत हुनु पर्ने उनको तर्क छ ।
यसै विषयमा शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग, टेकुका विशेषज्ञ डा.शेरबहादुर पुनले वर्डफ्लुबाट कुखुराहरु मरेकोे कुरा त संचार माध्यमबाट थाहा पाएको तर मान्छेकै मृत्यु भएको पहिलो पल्ट थाहा पाएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । विश्वमा नै दुलर्भ रोग भएकोले नेपाली जनमानसका लागि नयाँ र आश्चर्यको बिषय भएको उनको तर्क छ । वर्डफ्लुको संक्रमणबाट मानिसको मृत्यु भएको घटनाको विवरण किन गोप्य राखियो भन्ने बारेमा उनको भनाई छ,‘मानिसमा वर्ड फ्लुको संक्रमण भएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट हुने हुँदा यो रोगको घटनाको प्रकृति नखुलेको हुनसक्ने मेरो विश्वास छ । रोगको नमूना विदेशमा जाँच गर्नु पर्ने भएकोले भएकोले विवरण आउन समय लागेको हो ।’
पश्चिमा मुलुकमा जाडो महिनामा एच.फाइभ.एन.वान.भाइरसबाट मानिस संक्रमित हुने तर नेपालमा उष्ण हावापानी रहेको र गर्मी मौसममा रोगबाट पशुपंक्षी प्रभावित हुने पुनले बताए ।
नेपालमा सन् १९८९ बाट वर्ड फ्लुको भाईरस देखा परेको डा. पुनले जानकारी दिए ।
२०७६ बैशाख २६ बिहीबार ११:४०:०० मा प्रकाशित
अल्छीपना बुद्धिमानीको निसानी
काठमाडौँ ३० साउन । अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले बडो अचम्मको कुरो पत्ता लगाएको दाबी गरेका छन् । त्यो के भने, अल्छी व्यक्ति सक्रिय रहनेहरूको दाँजोमा